Rabshado ka dhashay Doorashada Bangladesh oo sababay dhimashada 7 ruux & dhaawaca 20 kale. | Dayniile.com
Home Warkii Rabshado ka dhashay Doorashada Bangladesh oo sababay dhimashada 7 ruux & dhaawaca...
Rabshado ka dhashay Doorashada Bangladesh oo sababay dhimashada 7 ruux & dhaawaca 20 kale.
Ugu yaraan 7-ruux ayaa ku geeriyootay rabshado ka dhacay dalka Bangaladesh taas oo la xiriirta Wakiilada Golaha Deegaanka ee Doorashada la filayo in ay dalkaas ka qabsoonto oo uu hareeyay muran & isku dhac.
Xisbiga talada haya ayaa libin ka sheegtay codadka la tiriyay balse waxaa walaac ka muujiyay Xisbiga Mucaaradka ah iyo siyaasiyiinta u xusul-duubeysa sidii ay u qabsan lahaayeen awoodda maamulka guud ee Dalka.
Rabasho ayaa hareeyay meelaha qaar, meelaha ugu daran ee isku dhacyada ka dhaceen waxaa kamid ah goobaha miyiga ah ee la geeyay sanaadiiqda codbixinta, dadkii codeynayay ayaa lagu dul dagaalamay sida ay tebisay
Previous articleTaliye Bishaar: Saxmadda waddooyinka waxaa sabab u ah Gaadiidka Xamuulka & Mootooyinka.
Qaraxaan oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay Hoolka Xarunta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu Aaso...
President Macron’s visit to Saudi Arabia marks a new era of...